I-Bionime glucometer gm 100, 110, 300, 500 no-550: ukubuyekezwa, amayunithi nemiyalo > Ukwelashwa nokuvimbela
I-Bionime glucometer gm 100, 110, 300, 500 no-550: ukubuyekezwa, amayunithi nemiyalo
1 Izici zedivayisi
Imivimbo emi-3 yokuhlola
4 Isampula yegazi
I-bionime glucometer ingaba yithuluzi elibaluleke kakhulu kwiziguli ezinesifo sikashukela. Ngemuva kwakho konke, ngale ndlela yokusebenza kwengqondo kubaluleke kakhulu ukwazi izinga lakho le-glycemia ngokulungiswa okulungile kwephrofayili ye-glycemic. Ukuze ungagijimeli esibhedlela noma emtholampilo nsuku zonke, odokotela batusa ukusetshenziswa kwabahlaziyi beshukela abaphathwayo, njengeBionime glucometer.
Namuhla zingathengwa cishe kuwo wonke amakhambi ekhemisi. Kuze kube manje, imakethe inikeza inani elikhulu lamadivayisi wokulinganisa izinkomba ze-glycemia zabakhiqizi abahlukahlukene (Abbott, One Touch, Bionime) zezigaba zamanani ahlukahlukene.
Ngaphezu kwalokho, ngokusho kokubuyekezwa kwabathengi nodokotela, enye yezindlela ezinhle kakhulu ngokwesilinganiso samanani / izinga yi-glucometer bionime gm 100, gm 300 ne-raytest (kwesokudla).
Inkampani Yezokukhiqiza - inkampani yaseSwitzerland ebambe iqhaza ekuthuthukiseni nasekukhiqizeni amadivayisi wokulinganisa ezokwelapha. Onke ama-glucometer alula, okwenza ukusetshenziswa kwawo kulungele hhayi kuphela kwentsha yanamuhla, kodwa futhi nakwabanesifo sikashukela esikhulile. Futhi kuvumela iziguli ukunquma isimo se-glycemia ngaphandle kosizo lwabachwepheshe bezokwelapha.
Le divayisi ibaluleke kakhulu emnyangweni wesibhedlela we-endocrinology, lapho udinga ukuthola ngokuphuthumayo idatha ngesimo se-carbohydrate metabolism. Kusetshenziswa odokotela abaningi lapho benza izivivinyo zokwelashwa. Lama-glucometer anezinzuzo ngaphezu kwamanye amamodeli.
Ukutholakala I-bionime gm 300, gm 100, ngokulungile, i-gs 300 glucometer ibiza inani eliphansi ngokuqhathaniswa namadivayisi afanayo ngekhwalithi nokusebenza. Imichilo yeGlucometer nayo inentengo engabizi, eyenza le divayisi ibe yintandokazi uma iqhathaniswa nezimbangi. Lokhu kuyinzuzo kulezi ziguli ezivame ukudinga ukukalwa koshukela.
Ukuhlaziywa kwesivinini esiphezulu. Umenzi uthi i-bionime ilungelo elifanele glucometer, kanye namanye amamodeli amaningi, aphephile ezigulini ngenxa yokuhlasela okungaphansi kwepeni lokubhoboza, elihlaba isikhumba kalula futhi ngaphandle kobuhlungu. Ngenxa yendlela ye-electrochemical, ukunemba okuphezulu nesivinini sokuzimisela ushukela kuyatholakala.
Funda futhi Kusho ukuthini okujwayelekile ushukela nokuthi yikuphi ukuphambuka okuyingozi kukho
Kunenombolo enkulu yokubuyekezwa okuhle ngalawa madivayisi avela kodokotela nakwiziguli ezidinga ukulawulwa kwe-glycemic nsuku zonke.
Iketanga likhemisi nezitolo zezinto zokwelapha zikuvumela ukuthi uthenge imodeli oyidingayo. Okuthandwa kakhulu kuzo yi-gm100, gm 300, gs300, kanye no-210, 550, 110. Zifana kakhulu.
I-gluceter ye-bionime gm 100 ayidingi ukufakwa kumakhambi wayo wokuhlola. Le ncwadi ithi ukuze ihlaziywe kahle, idinga ama-microliters wegazi ayi-1,4, okubhekwe inani elikhulu uma uyiqhathanisa nabanye abahlaziyi.
I-Model glucometer 110 ivelele phakathi kwamanye amadivaysi ngenxa yokuphakama ngaphezu kozakwabo. Le yidivaysi elula, elula ukubheka izinga le-glycemia ekhaya. Ngenxa yezinzwa ye-electrochemical oxidase, imiphumela yokulinganisa enembile kakhulu iyatholakala.
I-bionime gs300 ibhekwa njengenye yamamodeli athandwa kakhulu ngenxa yokuhlangana kwayo. Imiphumela yokulinganisa iyatholakala ngemuva kwemizuzwana eyi-8.
Imodeli engu-550 ifakwe kwimemori egcina izilinganiso ezingama-500. Ukubhalwa kwekhompyutha nge-othomathiki.
Onke amamodeli afakwe isibonisi esikhulu esinokukhanya okukhanya okukhanyayo, lapho kukhona amanani amakhulu abonakala ngisho nakubantu asebekhulile abangaboni kahle.
Njengabanye abahlaziyi abaningi beshukela abaphathwayo, amamitha weBionime asebenzisa umucu wokuhlola. Kulula ukusebenza, zigcinwe kumashubhu ngamunye.
Umyalo uthi ingaphezulu lemichilo imbozwe ngama-elektroni akhethekile egolide. Ngenxa yalokhu, ukuzwela okukhulayo ushukela wegazi kutholakala, okuholela kumphumela onembile.
Abakhiqizi basebenzisa ukufakwa kwegolide ngenxa yokuthi le nsimbi ingafinyelela ukuqina kwe-electrochemical ngesikhathi sokuphendula kwamakhemikhali.
Kuyinto ethinta kakhulu ukunemba kwemiphumela etholakele ngesikhathi sokuhlaziywa kweshukela ngokusebenzisa abahlaziyi beprofayili yephrofayili ephathekayo ye-glycemic.
Imichilo yokuhlola ingathengwa ekhemisi noma emishini yezokwelapha.
Lezincwajana zokusebenzisa zithi imiphumela iyatholakala ngemizuzwana engu-5-8. Imodeli yedivayisi ithinta isikhathi sokuhlaziya. Ukuthola umphumela, kuyadingeka kusuka kuma-microliters wegazi angama-0,3 kuya kwayi-1,4. Inani loketshezi lwebhayoloji nalo lingemodeli ye-glucometer.
Imanyuwali yomsebenzisi yokunquma izinga kashukela cishe kuwo wonke amadivayisi iyafana.
Isigaba sokuqala ukuphathwa kwezandla ngesisombululo se-antiseptic noma insipho.
Ukufaka i-lancet esibayeni sokubhoboza. Ngemuva kwalokho ukujula kokujovwa kukhethiwe. Kubalulekile ukubheka ukuthi kwesikhumba esincanyana udinga ubuncane, kwesikhumba esinyene kufanelekile. Iziguli ziyacelwa ukuthi zibeke ukujula okuphakathi kokuqala.
Umugqa wokuhlola ufakwe kumitha, emva kwalokho uvule ngokuzenzakalela.
I-Droplet Drumpt kufanele ivele esikrinini.
Umunwe uyagwazwa. Ukwehla kokuqala kusulwe ngoboya bekotini ngaphandle kotshwala, ngoba kuthinta umphumela. Ukwehliswa kwesibili kulethwa kumucu wokuvivinya.
Umphumela uzokhonjiswa esikrinini ngemuva kwesikhathi esichaziwe kwimiyalo yemitha.
Susa umucu wokuhlola kusuka kudivayisi, ngemuva kwalokho idivaysi izovala ngokuzenzakalelayo.
Ngaphambi kokuthenga i-glucometer, kufanele uthintane nodokotela wakho ukuze uthole ukuthi iyiphi indlela engcono kunazo zonke.
I-Bionime-110 glucometer izokusiza ukubheka amazinga kashukela egazini ekhaya nsuku zonke. Le divayisi yenziwa yinkampani yaseSwitzerland futhi ilungele abanesifo sikashukela sanoma yimuphi unyaka. Ngokubambisana nedivaysi ongayithenga. Amamodeli anhlobonhlobo azokuvumela ukuthi ukhethe idivaysi ngokunembe ngangokunokwenzeka ezidingweni zomuntu ngamunye zesiguli.
Incazelo yemitha ye-Bionime
I-Bionheim electrochemical glucometer yibhokisi lepulasitiki elinombukiso. Idivayisi isebenza ngemicu yokuhlola efakwe emgodini okhethekile.
Imishini iyahlukahluka kuye ngemodeli, kepha idivaysi ngayinye inamabhethri futhi ifakwe isibonisi esikhulu esinamanani amakhulu, okuvumela abangaboni kahle ukuba basebenzise idivaysi.
I-Bionheim-300 glucometer inememori eyakhelwe ngaphakathi futhi ingaxhunywa kwikhompyutha.
Izinketho eziningi zokuhlela zamadivayisi zizokuvumela ukuthi ukhethe okungcono kakhulu ngohlobo 1 bese uthayipha abanesifo sikashukela, abangaboni kahle nabadala. Wonke amadivaysi anezingxenye ezihlukile zokulinganisa, adinga inani elehlukile legazi lokuhlolwa, futhi ahlukile ekuzwisaneni, kanye nesikhathi esikhishwe ngaso umphumela. Imvamisa, amamodeli alandelayo athengwa ochungechungeni:
Imodeli ye-GM-110 isesigabeni samanani ashibhile futhi ilungele ukusetshenziswa okuzimele.
"I-Bionheim-100". Usizo lwedivaysi ekulinganisweni kwe-plasma, minus - 1.4 μl yempahla yegazi iyathathwa ukuze ihlolwe.
IGlucometer Bionime GM-110. Idivaysi inezindleko eziphakeme nezindleko zekhwalithi, iguqulwa kakhulu ekuhlolweni ekhaya. Ukwandisa ukunemba kwemiphumela, isizweli se-oxidase singasetshenziswa ngokungeziwe.
Model Bionime GM300. Umhloli olula futhi osheshayo unikeza imiphumela ngemizuzwana eyi-8, unesibonisi esikhulu.
I-Bionime GS-550. Ine-encoding okuzenzakalelayo. Inkumbulo eyakhelwe ngaphakathi inika ukufinyelela emiphumeleni yakamuva engama-500, isikrini siqokonyisiwe.
Ukulungiselela imitha ye-Bionime Rightest GM namanye amamodeli ochungechungeni kwenziwa ngokuzimela. Ukuyifeza, imiyalo yokusebenzisa enikezwe ngedivayisi izosiza.
Izinhlobo eziningi zinokulinganiswa okuzenzakalelayo, ezinye zidinga ukulungiswa ngesandla. Isikhathi sokulinda somphumela siyahlukahluka ukusuka kumasekhondi amahlanu kuya kwayi-8. Ukuhlaziywa, kuthathwa u-0.3-0.5 μl wegazi.
Inqubo yokuhlola ijwayelekile futhi iqukethe izigaba eziningana:
Indawo yesampula yegazi ihlaselwe nge-antiseptic.
I-lancet ifakwe esibayeni sesirinji futhi nokujula kokujovwa kwesikhumba kuyalungiswa.
Imicu yokuhlola ifakwe kudivayisi, ngemuva kwalokho izovulwa ngokuzenzakalelayo.
Lapho umaki onokuwahla esibukweni sikhanya, kwenziwa ukubhoboza isikhumba.
Ukwehla kwegazi okokuqala kusulwe, kwesibili kufakwa kumcu wokuhlolwa.
Ngemuva kwemizuzwana embalwa, idivaysi ikhiqiza umphumela, emva kwalokho umdanso osetshenzisiwe uyasuswa.
Impendulo ibhalwe kwimemori yefoni.
Imichilo yokuhlola yedivayisi idinga ukuthi ithengwe kuphela kumenzi oyedwa.
I-Bionime Rightest glucometer kanye nezinye izinhlobo zedivayisi zidinga izinto zokulahlwa zomkhiqizi ofanayo.
Endabeni yokusetshenziswa kwabahloli bangaphandle noma izibambo, ithuluzi lingaduka, liphule noma linikeze umphumela osontekile. Ungathenga izinto ekhemisi, zithengiswa ngaphandle kokuthola umuthi.
Ngaphambi kokusetshenziswa, kunconywa ukuthi uhlole ubuqotho bokuphakwa nokuhambisana kosuku lokukhipha.
Okutholwayo kuvame ukuza nedivayisi ekuthengeni kokuqala, bese kudingeka kuthengwe. Imichilo yokuhlola eminye imodeli ihlanganiswe ngawodwana futhi kulula ukuyisebenzisa.
Ingaphezulu lomhloli limbozwe nge-alloy emincane eyenziwe ngegolide, enikeza ukuzwela okuphelele kwemichilo ekwakhekeni kwamakhemikhali egazi elithathiwe, okuvumela imitha ukuba inikeze umphumela onembile impela. Imvamisa kuthengiswa izingcezu eziyikhulu ngephakethe ngalinye.
Lapho uthenga, kufanele unake usuku lokukhiqiza kanye nokuqina kwephakheji.
Izimbotshana zepeni yesirinji ziyasaphaza futhi akunconywa ukuthi ziphinde zisebenzise. Ungawathenga ekhemisi ekhethekile ngaphandle kadokotela. Iphakethe liqukethe ama-lancets angama-50, kunamaphakethe amakhulu ezomnotho wezingcezu ezingama-200. Ububanzi benaliti ngu-0.3 mm, okwenza inqubo yokulinganisa igazi ingabi buhlungu ngangokunokwenzeka.
I-Bionime glucometer: isibuyekezo, izibuyekezo, imiyalo ye-Bionime
Ezimweni zesifo sikashukela i-mellitus, kubaluleke kakhulu ukwenza uhlolo lwegazi lwezinsuku zonke ukuthola i-glucose emzimbeni. Ukuze bangahambi kuyi-polyclinic bayokwenza ucwaningo kwelabhorethri nsuku zonke, abanesifo sikashukela basebenzisa indlela elula yokukala igazi ekhaya nge-glucometer.
Lokhu kukuvumela ukuthi uthathe izilinganiso nganoma yisiphi isikhathi, noma kuphi ukuze uqaphele ushukela wegazi lakho.
Namuhla ezitolo ezikhethekile kunokhetho olukhulu lwamadivayisi wokulinganisa igazi ngoshukela, phakathi kwalo iBionime glucometer ithandwa kakhulu, okutholakale ukuthandwa hhayi eRussia kuphela kepha nakwamanye amazwe.
IGlucometer nezimpawu zayo
Umenzi wale divayisi yinkampani eyaziwayo evela eSwitzerland.
I-glucometer iyithuluzi elilula nelisebenziseka kalula, okungelona elincane kuphela kodwa futhi neziguli esezikhulile zingabheka amazinga kashukela egazini ngaphandle kosizo lwabasebenzi bezokwelapha.
Futhi, i-Bionime glucometer ijwayele ukusetshenziswa odokotela lapho behlola izivivinyo ngokomzimba zeziguli, lokhu kufakazela ukunemba nokuphakama kwayo okuphezulu.
Intengo yamadivayisi weBionheim aphansi impela uma uqhathaniswa namadivayisi we-analog. Imichilo yokuhlola nayo ingathengwa ngentengo engabizi, okuyi-plus enkulu kulabo abavame ukwenza izivivinyo ukuthola i-glucose yegazi.
Lawa amathuluzi alula futhi aphephile anesivinini sokucwaninga okusheshayo. Ipeni lokubhoboza lingena kalula ngaphansi kwesikhumba. Ukuhlaziya, kusetshenziswa indlela ye-electrochemical.
Ngokuvamile, ama-gluioneter we-Bionime anezibuyekezo ezinhle ezivela kodokotela nakwabasebenzisi abajwayelekile abahlola izivivinyo zeglue nsuku zonke.
Namuhla, ezitolo ezikhethekile, iziguli zingathenga imodeli edingekayo. Abantu abanesifo sikashukela banikezwa i-Bionime glucometer 100, 300, 210, 550, 700. Zonke lezi zinhlobo ezingenhla zifana kakhulu, zinesibuko sekhwalithi ephezulu nekhwalithi yasemuva elula.
Imodeli yeBionheim 100 ikuvumela ukuthi usebenzise idivaysi ngaphandle kokufaka ikhodi futhi ilinganiswa ne-plasma. Okwamanje, ekuhlaziyeni, okungenani i-1,4l yegazi iyadingeka, okuyinto eningi. Qhathaniswa namanye amamodeli.
I-Bionheim 110 igqame phakathi kwazo zonke izinhlobo futhi idlula ozakwabo ngezindlela eziningi. Le yithuluzi elilula lokwenza ukuhlaziya ekhaya. Ukuthola imiphumela efanelekile, kusetshenziswa inzwa ye-electrochemical oxidase sensor.
I-Bionime 300 idume kakhulu phakathi kwabanesifo sikashukela, inefomu elivumelekile. Lapho usebenzisa le nsimbi, imiphumela yokuhlaziya iyatholakala ngemuva kwemizuzwana eyi-8.
I-Bionime 550 ifaka inkumbulo enamandla okuvumela ukuthi ulondoloze izilinganiso zokugcina ezingama-500. Ukufaka ikhodi kwenziwa ngokuzenzakalelayo. Isibonisi sinokukhanya okuhle emuva.
I-Glucometer nemichilo yokuhlola
Imitha kashukela wegazi we-bionime isebenza ngemichilo yokuhlola enamaphakeji ngamanye futhi kulula ukuyisebenzisa.
Bahlukile ngoba indawo yabo yembozwe ngama-elektroni akhethekile agolide-uhlelo olunikeza ukuzwela okwengeziwe ekwakhekeni kwegazi lemichilo yokuhlola, ngakho-ke banikeza umphumela onembile kakhulu ngemuva kokuhlaziywa.
Inani elincane legolide lisetshenziswa abakhiqizi ngesizathu sokuthi le nsimbi inenhlanganisela ekhethekile yamakhemikhali enikeza ukuqina okuphezulu kakhulu kwe-electrochemical. Yile nkomba ethinta ukunemba kwezinkomba ezitholakele lapho usebenzisa imicu yokuhlola kwimitha.
Ukuze imichilo yokuhlola ingalahlekelwa ukusebenza kwayo, u-x kufanele agcinwe endaweni emnyama. Kude kude nelanga.
Kwenziwa kanjani amasampula egazi kushukela
Ngaphambi kokwenza ukuhlolwa kwegazi, kuyadingeka ukuthi utadishe imiyalo yokusebenzisa futhi ulandele izincomo zayo.
Udinga ukugeza izandla zakho ngensipho uzesule ngethawula elihlanzekile.
I-lancet ifakwe ku-pi-piercer, ukujula kokudonswa edingekayo kukhethiwe. Esikhunjeni esincane, inkomba ye-2-3 ilungile, kepha uma ulukhuni, udinga ukukhetha inkomba ephakeme.
Ngemuva kokuba umucu wokuhlola usufakiwe, imitha lizovulwa ngokuzenzakalelayo.
Udinga ukulinda kuze kubonakale isithonjana esine-blinking icon.
Umunwe ugwazwe ngepeni lokubhoboza. Ukwehla kokuqala kusulwe ngoboya bekotini. Eyesibili igxiliwe emgqeni wokuvivinya.
Ngemuva kwemizuzwana embalwa, umphumela wokuhlolwa uzovela esibukweni.
Ngemuva kokuhlaziywa, umucu kufanele ususwe.
Institution bionime gm 100: izici zokusebenzisa
Njengamanje, imakethe inikeza amamodeli amaningi we-glucometer ephezulu yanamuhla, okudingeka ukuthi abanesifo sikashukela babheke isimo sabo. Ziyahluka ngokusebenza okwengeziwe, ukunemba, umenzi kanye nentengo. Imvamisa, ukukhetha olungile kuzo zonke izindlela akulula. Ezinye iziguli zithanda idivaysi yeBionime yemodeli ethile.
Ngokuvamile ekuthengisweni ungathola amamodeli we-GM300 ne-GM500. Eminyakeni embalwa ngaphambili, i-bionime gm 110 ne-100 nayo yenziwa ngenkuthalo. Noma kunjalo, okwamanje abafuneki kakhulu, ngoba amamodeli we-GM 300 no-500 anokusebenza okukhulu nokunemba, ngentengo efanayo. Izici zokuqhathanisa zamadivayisi zikhonjiswe kuthebula elingezansi.
Izici zokuqhathanisa zedivayisi GM300 ne-GM500
Ipharamitha GM300 GM500
Intengo, ama-ruble 1450 1400
Imemori, inombolo yemiphumela 300 150
Ukuxhumeka Ngokuzenzakalelayo emva kwemizuzu engu-3 Ngokuzenzakalelayo emva kwemizuzu emi-2
Umsoco I-AAA 2 Pcs. CR2032 1 ama-PC.
Ubukhulu, cm 8.5x5.8x2.2 9.5x4.4x1.3
Isisindo segramu 85 43
Glucometer bionime gm ukufundiswa okuyi-100 kanye nemibhalo yezobuchwepheshe ibonakala cishe. Bobabili abakwa-GM100 kanye neGM110 banezimfanelo ezifanayo.
I-Bionime 300 glucometer kanye nezinye izifaniso zayo, ezikhiqizwe ngumkhiqizo ofanayo, zinokucushwa okubanzi okuhle.Noma kunjalo, ingahluka ngokuya ngephuzu nesifunda sokuthengisiwe, kanye nemodeli yedivayisi (akuwona wonke amamodeli anesethi efanayo yokulethwa). Ngaphezu kwalokho, ukuphelela kokucushwa kuthinta ngqo intengo. Imvamisa izakhi ezilandelayo zifakwa kwiphakeji:
Empeleni imitha enento yebhethri (uhlobo lwebhethri "ithebhulethi" noma "umunwe",
Imichilo yokuhlola yedivayisi (iyahlukahluka ngokuya ngemodeli yedivayisi) izingcezu eziyi-10,
Izilonda ezingcolile zokubhoboza isikhumba lapho kusampulwa izingcezu ze-sampula zegazi--10,
I-Scarifier - insiza enomshini okhethekile ovumela ukubhoboza isikhumba ngokushesha nangaphandle kobuhlungu,
Imbobo yokufaka amakhodi, ngenxa yokuthi asikho isidingo sokufaka futhi ikhodi njalo lapho uvula iphakheji entsha yemichilo yokuhlola,
Idayari yokufunda amamitha ukunikeza udokotela umbiko ngesimo sempilo,
Imiyalo yokusebenzisa esebenza kudivayisi yakho
Ikhadi lewaranti yensizakalo uma kungenzeka yephule,
Icala lokugcina imitha nezinye izinto ezihlobene.
Le phakethe iza ne-bionime kwesokudla gm300 glucometer futhi ingahluka kancane kwamanye amamodeli.
I-bionime gm100 noma enye insimbi evela kulayini inezici eziningi zokuziphatha nezinzuzo ezenza iziguli zikhethe amamitha kulo mkhiqizi. Izici ze-bionime gm100 zingokulandelayo:
Isikhathi sokucwaninga - imizuzwana engu-8,
Isampula yevolumu yokuhlaziywa kwe-1.4 μl,
Ukuchazwa kwezinkomba ebangeni kusuka ku-0.6 kuya ku-33 mmol ilitha ngalinye,
Imiyalo ye-bionime gm 100 glucometer ikuvumela ukuthi ugcine ngokushisa kwe -10 kuya kuma-60 degrees,
Ingagcina izilinganiso ezifika ku-300 zakamuva, futhi zibalwe amanani aphakathi kosuku, isonto, amasonto amabili nenyanga,
I-Bionime gm100 ikuvumela ukuthi uthathe isilinganiso esingu-1000 usebenzisa ibhethri elilodwa kuphela,
Idivaysi ivula futhi icime ngokuzenzakalela (ivula lapho kufakwa i-tepi, isusa ukuxhumana - imizuzu emithathu ngemuva kokufaka itheyiphu ngokuzenzakalelayo),
Asikho isidingo sokuphinda usebenzise idivaysi ngaphambi kokuvulwa ngakunye okulandelayo kokufakwa kwamapompi wokuhlola.
Ngaphezu kwezici zobuchwepheshe, abasebenzisi abaningi baphawula isisindo esiphansi sedivayisi nobukhulu obuncane, sibonga lapho kulula ukuthatha nawe endleleni noma emsebenzini.
Icala leplastiki eliqinile lenza ukuthi imitha ingabi ntekenteke - ngeke iphule lapho ilahliwe, ngeke ivele lapho icindezelwa kalula, njll.
I-bionime gm 110 kumele icinywe. Vula iphakethe lemichilo yokuhlola, susa imbobo yokulawula kuyo bese uyifaka kusixhumi esingaphezulu sedivayisi ize ime. Manje udinga ukugeza izandla zakho bese ufaka i-lancet ku-bionime glucometer. Setha ukujula kokubuthwa komuntu omdala kube ngu-2 - 3. Okulandelayo, qhubeka ngokuya ngokwe-algorithm:
Faka i-tepi kubhionime kwesokudla gm300 metres. I-Beep izokhala futhi idivaysi ivuleke ngokuzenzakalela,
Linda kuze kube yilapho i-gluceter yegionime eyiqonde gm300 i-iconcometer
Thatha isikhafu bese ubhoboza isikhumba. Cwilisa bese usula iconsi lokuqala legazi,
Lindela ukuthi idonsi lesibili libonakale futhi ulisebenzise kwiteyiphu yokuhlola efakwe ku-Bionime 300 metres,
Linda imizuzwana engu-8 kuze kube yilapho i-bionime gm100 noma enye imodeli iphothula ukuhlaziya. Ngemuva kwalokho, umphumela uzokhonjiswa esikrinini.
Uma usebenzisa i-bionime gm 100 glucometer, imiyalo yokusebenzisa kwayo itusa ukulandelana okunjalo kokusetshenziswa. Kepha kuyiqiniso kwamanye amadivaysi alo brand.
Kwi-glucometer, udinga ukuthenga izinhlobo ezimbili zezinto ezidliwayo - imichilo yokuhlola kanye namanqe. Lezi zinto zokwakha kumele zitshintshwe ngezikhathi ezithile. Amateyiphu wokuhlola ayatholakala.
Amabhubesi asetshenziselwa ukubhoboza isikhumba awasaphili, kepha futhi adinga ukumiselelwa ngezikhathi ezithile lapho kukhanya.
Ama-Lancets we-gs300 noma amanye amamodeli afane yonke indawo futhi akukho nzima ukuthola efanelekile yesikhalazo esithile.
Isimo siyinkimbinkimbi ngokwengeziwe ngemivimbo. Lokhu okuqukethwe okuthize okumele kuthengwe ngemodeli ethile yemitha (izilungiselelo zedivayisi imichilo zincane kakhulu kangangokuba kudingeka ukuthi baphinde basebenzise amanye amadivaysi lapho bevula amaphakethe amasha) ngoba awukwazi ukusebenzisa okungalungile - lokhu kugcwele ukufundwa okuhlanekezelwe.
Kunemithetho eminingana yokusebenza kwemivimbo yokuhlola ye-bionime gm 110 noma enye imodeli:
Vala isembozo ngokushesha emva kokukhipha i-tepi,
Gcina kumswakama ojwayelekile noma ophansi,
Ungasebenzisi ngemuva kokuphela kosuku.
Ukwephulwa kwale mithetho uma usebenzisa ama-gs 300 noma amanye amateyipu wokuhlola kuzoholela ekufundeni okungalungile.
Ilungiselela imitha ye-Bionime Rightest GM 110 - Amahlaya - bukela amavidiyo
Ungalusebenzisa kanjani ushukela wegazi ngokushesha. Ukwelapha isifo sikashukela! Ukunciphisa ushukela wegazi, udinga ukudla okulinganiselayo, impilo ye-pancreatic. Usizo lwamakhambi esintu, okungukuthi ... Bheka ividiyo!
Unga-oda kusistimu eqhubekayo yokuqapha ushukela ku-https: //www.medmag.ru noma ngocingo + 7-495-221-2276. —— Inkampani ye-MEDMAG https: //www.medmag.
ru iyisikhungo sesevisi nesiqinisekiso sezinhlobo zemikhiqizo eyaziwayo yama-glucometer: I-Accu-Chek, iTouch One touch, i-One Touch Ultra, Contour TS, i-Satellite Express. —— https://www.medmag.ru/index.php?category>
com / Adv.html - ku-MEDMAG amanani ashibhile kakhulu emichilo yokuhlola nama-glucometer —— https://www.medmag.ru/index.php?page>
Le vidiyo elula ikhombisa ukuthi ungayisetha kanjani imitha kashukela we-Bionime GM 550 ukuze isetshenziswe. Isikhathi, usuku, futhi silungele ukuya ukuthumela ku-EosHealth isiguli sangasese sesiguli
I-Online Store Pharmacy 24: http://apteka24.me/ Ngubani okhathalelayo, ongafiki lapha - http://www.donationalerts.ru/r/aleksandrhom Group ngokuxhumana ne-https: //vk.com/saharniy__diabet Group : //ok.ru/diabetes.pravda Ngixhumene ne-https: //vk.com/id306566442 ngisezofunda nabo ekilasini https://ok.ru/feed Umlingani wami we-VSP Group https: // youpartnerwsp.
com /joyina? 100768 ====================================== ====== NGIYABONGA UKUZIBONA IZI Vidiyo. Ingabe imichilo yokuhlolwa ephelelwe yisikhathi ikhonjiswe kahle? https://www.youtube.com/watch?v=fY8ozJkauXY&t=25s Ingabe isifo sikashukela yindlela yokuphila noma isifo esibi? https://www.youtube.com/watch?v=6_XjCMtQwV4 Ngubani othole i-insulin. https://www.youtube.
com / watch? v = zIM2cULvSE4 & t = 25s Umbono nesifo sikashukela https://www.youtube.com/watch?v=yaclHWqyz-0&t=25s
Kubantu abatholakala benesifo sikashukela, kubaluleke kakhulu ukukala ngokufanele ushukela wegazi, ngoba umthamo wezidakamizwa okwehlisa ushukela noma i-insulin uncike kulokhu.
Kuyavela ukuthi imitha yeglucose yasekhaya ngokwayo ingathinta ushukela wegazi. Abethuli be- “Phila kahle!” Bazokutshela ukuthi ubhekeni lapho ulinganisa amazinga kashukela ngemitha kashukela wekhaya.
Bona ukukhishwa okugcwele lapha: https://youtu.be/XDGLz9NMiao
جهازقياس السكر I-Bionime
Nazi izindlela eziningi http://gotovimrecepty.ru/ http://razzhivina.ru/ bheka! _______________________________________________________________________________________________ http://samidoktora.ru/ Sikala ushukela wegazi nge-OneTouch Khetha i-glucometer elula ngikumema eqenjini http://www.odnoklassniki.ru/gotovimedu Izindlela zokupheka ezidumile
Umuntu otholakale enesifo sikashukela sohlobo 1 noma uhlobo 2 kufanele azi ukuthi wehlisa kanjani ushukela wegazi ekhaya. Lokhu kungenziwa kuphela ngendlela ehlanganisiwe yokwehlisa izinga layo. Okubalulekile: Ukunciphisa amazinga kashukela, ukuzivocavoca, ukuhamba amabanga amade, nomsebenzi wangaphandle kunconyiwe.
Ukwehlisa ushukela wegazi, uzodinga: • I-glucometer enezinkomba ezifanele, • Izidakamizwa ezinconyelwe udokotela wakho, • Ukudla okuqinisekisiwe okune-carb ephansi, • Amavithamini kanye nama-microminerals, • Amakhambi okwelapha ukwehlisa ushukela wegazi. Ukunikeza izincomo, odokotela bagcizelela ukuthi inani lama-carbohydrate namaprotheni ngesikhathi sokudla akufanele liguqulwe.
Kusetshenziswa kuphela i-glucometer lapho inani elingaphephile linganqunywa. Umzimba wabantu onesifo sikashukela usabela ngendlela ehlukile ekudleni. Kwenye ingxenye yeziguli, ushizi we-cottage shizi nejusi utamatisi akuholelanga ukugxuma futhi kungadliwa ngaphandle kokulimaza impilo. Kweminye, le mikhiqizo efanayo iholela ekukhupheni okukhulu kwe-glucose yegazi ngemuva kokudla.
Lezi zici ngazinye zingacaciswa kuphela uma kufundwa imitha yeglucose yasekhaya. Ngemuva kokuthatha idivaysi yokuqapha okuqhubekayo okungenaphutha ebufakazini, ungasheshe wenze uhlu lwemikhiqizo evinjelwe noma engenabungozi ukuyisebenzisa.
Ukusetshenziswa kwe-glucometer kusiza ukukhomba imikhiqizo yokudla ephephile eyenza imenyu yaphakade. Izazi zezempilo zikholelwa ukuthi ukudla okune-carbohydrate okulinganiselayo kuyindlela eyinhloko yokunciphisa ushukela wegazi. Lapho usisebenzisa, isimo sesiguli sisheshe sibe ngokujwayelekile futhi ukufundwa kwe-glucometer kuyancipha.
Ukudla ukudla okunenkomba ye-glycemic ephansi kusiza ukugcina ushukela wakho uzinzile. Kunconywa ikakhulukazi ukudla noma iyiphi inyama, inhlanzi nezinhlanzi zasolwandle. Inkinga enkulu yesifo sikashukela ukuphazamiseka kwe-metabolic. Ngenxa yalokhu, ushukela wegazi awunakungena emangqamuzaneni. Ngenxa yalokhu, ukusebenza kwazo zonke izinhlelo ezihlushwa ukushoda kweglucose kuyaphazamiseka.
Ukuze uthuthukise imetabolism futhi wenze ngokwejwayelekile i-glucose metabolism, kunconywa ukubamba iqhaza kuhlobo oluthile lwezemidlalo. Ukwanda kokuzivocavoca umzimba kungaxazulula le nkinga. Ngesikhathi sokuzivocavoca ngokomzimba, izinto ezikhethekile ama-endorphin akhiqizwa emisipha eyenza zonke izinhlobo zemetabolism zijwayeze zonke izinhlobo.
IGlucose ngalesi sikhathi ingangena izicubu ngqo kusuka egazini, okuyilokho abanesifo sikashukela abafuna ukukunciphisa. Ukusebenza okusebenzayo kwamaseli kuleli cala kudinga i-insulin encane. Kuyadingeka ukubonisana ne-endocrinologist mayelana nokuthi yimuphi umsebenzi womzimba ovunyelwe ukuze ungalimazi umzimba, futhi ngosizo lomdlalo olukhethiwe, lungisa ushukela. https://youtu.be/MVY_YXSh3ck - Ungalusebenzisa kanjani ngokushesha ushukela wegazi ekhaya
Kuyavela ukuthi imichilo inayo "indlela yokuphepha" uma ngemuva kokusetshenziswa igezwa ngamanzi agobhozayo futhi igcinwe embizeni evaliwe, ungaphinde uyisebenzise. Kuliqiniso, kukhona isici esiphambanisayo kepha sincane kakhulu, endaweni ethile ezungeze u-0.1. Ngokwanda ngesikhathi sokusetshenziswa, ushintsho olwanele futhi udinga ukukulungisa ngokuqondile ... Konke lokhu kuyikhulu leminyaka lokugcina! Bukela ividiyo ukuthi ungayenza kanjani strip uqobo!))
Imiyalo yevidiyo enemininingwane yokusebenzisa imitha ye-Contour Plus (i-Contour Plus), imichilo yokuhlola ye-Contour Plus ne-Microlet 2 lancet (Microlight 2)
Ngokusho kwe-WHO, isikhathi sokuphila kwabantu abanesifo sikashukela siphansi kakhulu kunesilinganiso. Ngakho-ke, uhlelo lubhekisisa kakhulu ukuvimbela isifo sikashukela sohlobo 2. Ukuze uvikele ukukhula kwesifo, udinga ukukala njalo okuqukethwe ushukela egazini.